जनताको गीत गाँउदा गाँउदै मर्न चाहन्थे पाख्रिन (उनले मंगलबार गाएको गीतको भिडियो) – Halkaro
जनताको गीत गाँउदा गाँउदै मर्न चाहन्थे पाख्रिन (उनले मंगलबार गाएको गीतको भिडियो)
प्रकाशित मिति : २०७४, ५ मंसिर मंगलवार November 23, 2017
चितवन । मंगलबार दिउसो कार्यक्रममा गीत गाँउदा गाँउदैँ ढले जनताका गायक खुसीराम पाख्रिन । उनी अाफ्ना सहकर्मीहरूमाझ सँधै एउटै कुरा भन्ने गर्थे ‘जनताको गीत गाँउदा गाँउदै मर्न पाँउ ।’ हुन पनि त्यस्तै भयो उनी मंगलबार माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाशको श्रद्धाञ्जली सभामा गाउँदा अाएको पसिना अोभाइसकेको थिएन् । उनी दैबका प्यारा भए ।
तत्कालनिन चुनवाङ बैठकमा माअोवादी हेडक्वाटरलार्इ रूवाउने गीतका सर्जक पाख्रिनले माओवादी युद्धमा नजिकबाट मृत्यु भोगे । उनले गीत मार्फत युवालार्इ जाग्न सन्देश त दिए तर अाँफू भने अब कहिल्यै नउठ्ने गरी विदा भए । पाख्रिनले मञ्चमा दुईवटा गीत गाएका थिए ।
उमेर वृद्ध भए पनि जोश र जाँगरका साथ स्टेजमा फूर्ति साथ गीत सुनाएका यस्ता गायकलाई केहीबेरमा नै गुमाउनुपर्छ भनेर सायदै सभामा सहभागी हजारौं मानिसहरुले सोचका थिए ।
गीत गाएर कुर्सीमा बसेका पाख्रिन अचानक ढले । उनलाई गाडीमा राखेर नारायणी सामुदायिक अस्पताल लगियो । नाक र मुखबाट रगत आएका पाखि्रनलाई अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरे ।
सभास्थल र अस्पताल बीचको दूरी करिव १ किलोमिटर जति छ । अस्पतालका चिकित्सक डा. किशोर गौतमसहितको टिमले पाख्रिनलाई जोगाउन ४५ मिनेटसम्म अथक प्रयास गरे पनि जोगाउन सकेन ।
अस्पतालका चिकित्सक डा. गौतमका अनुसार पाखि्रनलाई अस्पताल ल्याउँदा उनको ब्लड प्रेसर र पल्स दुबै थिएन । ‘ल्याउनेवित्तिकै अवस्था गम्भीर भएकाले भेन्टिलेटरमा समेत राखेर वचाउने प्रयास गर्‍यौं, हृदयाघात त भएको थियो नै, उहाँले भोमिट पनि गर्नुभयो’ डा. गौतमले भने, ‘बेस्सरी भमिट गर्दा एस्पीरेशन निमोनियासमेत भयो । सुगर पनि ३२९ भन्दा बढी थियो ।’
जनयुद्धका क्रममा परिवारका सदस्यसमेत गुमाएका पाख्रिन सहिद परिवार हुन् । उनी माओवादी केन्द्रका हाल सल्लाहकार थिए ।
माओवादी पार्टी विभाजन भएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा लागेका पाख्रिन रामबहादुर थापाको टोली एकीकृत माओवादीमा फर्किएपछि उनी पनि माओवादी केन्द्रमा आएका थिए ।
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नः ४ मा ०७१ सालमा भएको संविधानसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका पाख्रिनको घर पश्चिम चितवनको रामपुरमा छ । पाख्रिनको शवलाई बुधबार माओवादी पार्टी कार्यालय कृष्णपुरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
← कांग्रेसको लहर देखेर कम्युनिष्टहरु भौतिक आक्रमणमा उत्रिएको राज्यमन्त्री गुरुङको आरोप
पचास हजार घुससहित प्रहरी निरीक्षक पक्राउ →